Zimbabwe: Dec 12 Movement Eyes Zim Investment - allAfrica.com
Zimbabwe: Dec 12 Movement Eyes Zim Investment
Mrs Plummer said they are in solidarity with President Mnangagwa's mantra "Zimbabwe is Open for Business" and are committed to play a role in rebuilding the economy of Zimbabwe which she said had been negatively affected by the illegal sanctions imposed by the West.
"We have been friends with the Zimbabwean Government for a long time. This time around, we want to take our relations to another level. We want to partner with the Government and invest in the tourism and energy sectors," she said.
"We know illegal sanctions are killing Zimbabwe's economy since they are affecting investment, so we are here to partner with the Government in the tourism and energy sectors. There is need for Africa to be economically free.
"It is important for Africa to be economically independent because the freedom of Africa is the freedom of all Africans around the world."
"The December 12 Movement has always been our friends. They have been mobilising support in USA for the unconditional removal of sanctions against Zimbabwe," he said.
"However, their visit and call today is more of an investment dialogue than political. We are excited about this because this shows that the mantra by the new dispensation that "Zimbabwe is Open for Business" is bearing fruit.
"They told us that they want to partner with Government in their investment and we do not see anything that will stop their interest and plans to be implemented. Our President said 'Zimbabwe is Open for Business', so indeed we are open for it."